Yangu iPhone yakabva yatota. Ndoita sei? Usashandise mupunga! - Zvimwe
zvinorevei makumi masere neshanu panhamba dzevatumwa
ipad yekudzokorora yakanamatira pane apple logo
dzimba dzevanhu vanopfuura makore makumi mashanu nemashanu
data rinotenderera kana kudzima
Yangu iPhone yakanyorova. Ndoita sei? Usashandise mupunga!
Mi Iphone Se Moj Qu Debo Hacer
Kana yako iPhone ikanyorova, iri emergency. Isu tinoziva zvekuita mune dzimwe emergency mamiriro, asi zvinoitwa nevanhu vazhinji kana maPhones avo akanyorova ndizvo inoshanda sekudira mvura mupani yemafuta anopisa : inokonzeresa zvakanyanya kukuvadza pane kunaka.
Chinhu chakanyanya kukosha mune chero chimbichimbi ndechekuti kugadzirira - Nzwisisa zvekuita kana yako iPhone ikanyorova, uye zvakanyanya kukosha, dzidza zvikanganiso zvinoitwa nevanhu zvinokonzeresa kukuvara kusingagadzirisike kumaPhones. izvo zvingadai zvakaponeswa .
Ndakawana ruzivo rwekutanga-ruoko nemaPhones akanyorova pandakashandira Apple. Dzokororazve, ndakasangana nevanhu avo vaikanganisa zvisingaite maPhones avo nekuda kwemazano ekupenga avakange vatambira kubva kushamwari.
mashandisiro ekushandisa mapepanhau emapepanhau
Uri kuverenga Chikamu 1 chetatu-chikamu akateedzana pane zvekuita kununura, kugadzirisa, kana kutsiva yakanyorova kana mvura-yakakuvara iPhone. Ini ndichatora ngano dzandakanzwa nezvekuchengetedza iyo yakanyorova iPhone, ini ndokuudza chii kwete Unofanira kuita uye ini ndichatsanangura yakanakisa sarudzo yekununura iyo iPhone inogona kunge iine kukuvara kwemvura.
Nhanho 1: bvisa mvura yese kubva kunze kweiyo iPhone yako
Chinhu chekutanga iwe chaunofanira kuita Kana yako iPhone ikanyorova, bvisa yakawanda mvura sezvinobvira kubva kunze kweiyo iPhone yako. Usazvidzimure, isu tave mukukuvara kupatsanura modhi.
Yako yakanakisa sarudzo microfiber jira, asi kana usina imwe yemachira padyo (uye pamwe haungadaro), unogona kushandisa hengechefu. Yambiro : Apa ndipo patinozoona yekutanga (zvese zvakajairika) kukanganisa kunoitwa nevanhu kana yavo iPhone yanyorova.
Mistake # 1: Iyo Yakabvaruka Hangekerchief Dambudziko
Iwe uchazoda kushandisa chimwe chinhu chakanyanyisa kuomesa yako iPhone, asi zvachose kwete iwe uchazoda kupfeka chimwe chinhu chinogona kutyora kana kusiya marara mukati. Hongu, nyama inonwiwa, asi ine tsika yakaipa yekutyora kana yasangana nemvura.
iphone hapana sim kadhi kukanganisa
Chii chinogona kukanganisika?
Kana iwe uri kuyedza kuburitsa mvura kubva muhedhifoni jack uye chikamu cheyakavhunika matissue, iwe ikozvino une matambudziko maviri: yakanyorova iPhone, uye headphone jack ine nyoro nyowani yakanamirwa mukati.
Kunze kwekunge iwe uine ruzivo nehedhifoni jacks pane iPhones, kwete uchatenda here zvakaoma sei kuwana chimwe chinhu kubva ipapo pasina kukuvadza bara.
Tissue vane yechipiri kudonha: ivo vanowanzo siya guruva kana zvisaririra mukati me iPhone yako. Usashandise nyama ine aloe - mune ino kesi, yakachipa nyama, zviri nani. Kana iwe uchikwanisa kubvarura tishu yenguva dzose uye pasina guruva rinobuda mairi, saka zvingave zvakanaka kurishandisa.
bhatani repamba harishande pa iphone 6
Ungazviita sei nemazvo
Kana iwe ukashandisa munyama, nyoro nyoro, kunyanya kana uchichenesa chiteshi chekuchaja uye headphone jack. Ingoisa iwo munyama, rega itore iyo mvura, uye zvinyoro nyoro kuibvisa. Usamonyorora - mativi emukati ehephonephone jack anogona kukonzera kuti nyama yacho itsemuke.
Mu peji rinotevera , isu tichagadzirisa nekukanganisa kwakaipisisa kunoitwa nevanhu kana vachiedza kuchengetedza yavo yakanyorova iPhone. Verenga pamusoro kuti uwane kuyedza kuomesa yako iPhone nemupunga kunogona kukonzera kukuvara kusingagadzirisike kune yako iPhone.
Mapeji (1 ye4):